तिथि मेरो पत्रु »5कुराहरू हस्तिहरु नाता हाम्रो बारे सिकाउन सक्छन्
समाचार "पुष्टि स्नातक" को जर्ज Clooney एक भान्सा मा एक तेल आगो जस्तै चाँडै फैलियो; राष्ट्र स्तब्ध पार्ने, र विश्वव्यापी आशाको किरण महिलाहरु दिने.
यसलाई "पुष्टि" गर्नुपर्छ: सुन्दर जर्ज विवाह छ!
कुन साँच्चै निको सकिन्छ कि प्रतिबद्धता फोबिया प्रमाणित गर्न जान्छ.
यो पनि हामी आज यहाँ अन्वेषण छौँ केही अन्य कुराहरू स्थापित ...
सबै आफ्नो glitz लागि, आकर्षण, पैसा, र महिमा, यो डेटिङ र संभोग गर्न आउँदा, अस्वीकार गर्न सकिँदैन एउटा कुरा त्यहाँ छ: तारा बस हामीलाई बाँकी जस्तै हो.
यो सही हो. हामी अक्सर आदर्शित गर्नु र कामना कि यी मान्छे जस्तै हुन, हाम्रो जस्तै त्यहि मुद्दा र चुनौती को केही सङ्घर्ष "मात्र मानवशरीरहरु।"
असुरक्षित महसुस जस्तै कुराहरू, बच्चा आमा नाटक, डर, भ्रम, र विश्वासघात– केही नाम. कि प्रेम साबित अन्तिम तुल्यकारक छ.
यहाँ सबै भन्दा ठूलो भिन्नता?
सेलिब्रिटीज को व्यक्तिगत मामिला जांच छन्, आलोचना र राष्ट्रिय मञ्चमा बाहिर खेलेको, सार्वजनिक देखने लागि.
जस्तै, यहाँ हामी आफ्नो धेरै देखिने "भूमिका" र रोमान्स सिक्न सक्छौं केही पाठ हो.
आफ्नो pencils तयार प्राप्त.
1. विश्वासघात "अरू महिला" prettier हुनुको वा तालिका थप ल्याउन बारेमा सधैं छैन. दुर्भाग्यवश, मान्छे सधैं "माथि व्यापार।" छैन
सुन्दर विचार, प्रतिभाशाली, हलीवुड मा महिलाहरु र कथित छल्न खोजेको भएका सार्वजनिक आंकडे प्रमुख पूरा: हाले बेरी, सैंड्रा, जेनिफर एन्निस्टन, मारिया श्राइवर. हामी यहाँ के सिक्न सक्छौं? व्यक्ति छल्न खोजेको भइरहेको भन्दा Infidelity अन्य व्यक्तिको विषयहरुमा बढी छ. तीतो नगर्नुहोस्, राम्रो हुन.
2. सधैं आनन्द किन्न सक्दैन मुद्रा. तथ्याङ्क छोडपत्र अमेरिका को अग्रणी कारण एक पैसा छ भनेर देखाउन. यद्यपि, हलीवुड मा, प्रसिद्ध मान्छे बढी नगद छ जहाँ हामी भन्दा कहिल्यै जीवनकालमा देख्नेछन् भन्दा, "समस्या प्रमोदवनमा।" अझै पनि छ हामी दुरुपयोग बारेमा साप्ताहिक मुख्य समाचार पढ्न, शक्ति संघर्ष, लत व्यवहार, रिस व्यवस्थापन, र विश्वासघात. यो केवल सधैं आनन्द प्रभावित गर्दैन धनदौलत देखाउन जान्छ.
3. आयु फरक एक "सम्झौता ब्रेकर हुन छैन."जेनिफर लोपेज र उनको कोरियोग्राफर प्यारा हेर, कासपर. लगभग एक 20 वर्षे उमेर प्रसार यस दम्पती लागि छैन, fabulously तर तिनीहरूले देखा साथ रही. वास्तवमा, यी दिन उनको अनुहार मा एक मुस्कान बिना jlo हेर्न दुर्लभ छ. तपाईं केटी जाने!
4. पुष्टि स्नातक हृदय परिवर्तन हुन सक्छ.
कहिलेकाहीं यो सही महिला लिन्छ. अन्य समयमा, समय एक ठूलो कारक हुन सक्छ. कहिल्यै भन्न कहिल्यै.
5. "सुरुमा तपाईं सफल छैन भने, फेरि प्रयास गर्नुहोस्। " तापनि हामीलाई केही हामी केही तारा संग देखेका छौँ साझेदार र छोटो मुठभेडों को घुमाई अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रेम कथामा एक "आनन्दित अन्त" लेख्न सक्छन् कि आफ्नो भावनात्मक दृढताको र आफ्नो विश्वासको लागि भन्यो जान सक्छ केहि छ, प्रेम खुला बाँकी द्वारा. उदाहरणका लागि, स्टीव हार्वे जस्तै सेलिब्रिटीज, लोपेज, एलिजाबेथ बर्टन, र डेमी मूर बढी समय वा दुई भन्दा डिब्बामा तल हिंडे छन्. तिनीहरूको ग्रहण दर्शन? अन्ततः, यो रहन बाध्य पार्छ.
वहाँ तपाईं यो छ.
स्टार हामीलाई खेलाउन. कहिलेकाहीं तिनीहरूले हामीलाई शिक्षित गर्न सक्छन्. यी पाँच पाठ यस उद्देश्यका लागि विशेष सेवा. हामी सबै तिनीहरूलाई पालन गर्नुपर्छ.